Diyaaraddo Ku Wareegaya Deegaanka Hawdka Magaaladda Hargeysa Oo Cabsi Ku Abuuray Dadka Iyo Xoollaha | Araweelo News Network (Archive) -
Diyaaraddo Ku Wareegaya Deegaanka Hawdka Magaaladda Hargeysa Oo Cabsi Ku Abuuray Dadka Iyo Xoollaha
Hargeysa (ANN) Dadka xoolo dhaqatada ee deegaamada Koonfurta Haw kaga beegan magaaladda Hargeysa ayaa sas ka qaaday Diyaarado joog hoose ku duulaya oo saacadihii lasoo dhaafay wareegayay Tuulooyinka qaar ka mid ah deegaankaa. Sidaa waxa saxaafada u sheegay
Badhasaabka Gobolka Hawd Jamaal Xuseen Hurre.
Guddoomiyaha Baligubadle waxa uu sheegay in diyaarado aan la aqoonsan oo ku socda joog hoose ay ku meeraysanayeen tuulooyin ka mid ah Deegaamada Bali-gubadle, Bali Cabane iyo Tuuladda Gumar oo ka tirsan Gobolka Hawd.
Badhasaabku wuxuu sheegay in diyaaradahaasi ay 24-kii saacadood ee la soo dhaafay hadh iyo habeenba ay dul wareegayaan deegaankaa, iyagoo gaadhaya xadka u dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya. Wuxuuna xusay inay cabsi ku abuureen dadka deegaanka iyo xoolohooda.
“Waxay cabsi ku abuureen dadkii reer miyiga ahaa waxaana cabasho naga soo gaadhay tuulooyin ka tirsan Degamada Balicabane iyo Tuuladda Gumar ee degmada Bali gubadle,waxay dadku noo sheegeen inay soo dhawaanayeen isla markaana ay Xoolihii ka didayeen,”ayuu yidhi Badhasaabka Gobolka Hawd, oo u waramayay Saxaafaddu.
Jamaal Xuseen wuxuu intaasi ku daray inuu magaalada Hargeysa u yimid si uu Xukuumadda dhexe ee Somaliland ugu wargeliyo arrinta diyaaradahaasi oo uu sheegay inay warwar ku abuurtay bulshada.
Cabashada dadka xoolo dhaqatada ah ee Koonfur Hawd ee magaalada Hargeysa ayaa kusoo beegantay. Kadib markii ay bulshada magaalada Burco ee xarunta gobolka Toghdeer habeenadii lasoo dhaafay ka aragagexeen Diyaadar laba habeen ku wareegaysay magaaladda Burco, taas oo ugu danbayntii sababtay in halkaa Ciidamada amaanka Somaliland habeen hore ka qabtaan shan nin oo lagu eedeeyay inay falal argagixiso oo ka dhan ah Somaliland maleegayeen, kuwaas dhinaca magaalada hargeysa la keenay shalay. Kadibna xabsiga loo gudbiyay.